Umphumela we-Fata Morgana: uyini, ukuthi ukhiqizwa kanjani kanye nezintshisekelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umphumela we-Fata Morgana
Siyazi ukuthi imvelo isenezinkulungwane zezimfihlakalo okufanele zixazululwe. Futhi okuningi kunezimfihlakalo lapho zivela olwandle. Ezinye izindawo emhlabeni zinobuhle bemvelo obufakwa kumbono ongabonakali obamangaza bonke abantu abawuvakashelayo. Namuhla sizokhuluma ngakho Umphumela we-Fata Morgana. Lo mphumela uvela kolunye ugu futhi ushiye wonke umuntu okwazile ukuwubona ngeso lengqondo ekhuluma.
Kule ndatshana sizokutshela ukuthi uyini umphumela weFata Morgana nokuthi kungani uvela.
1 Uyini umphumela we-fata Morgana
2 Kungani umphumela we-fata Morgana uvela
3 Izimo zokuqeqesha
Uyini umphumela we-fata Morgana
Igama lomphumela livela enganekwaneni kaKing Arthur. Ungumlingiswa wakudala ezincwadini zaseYurophu. INkosi u-Arthur wayenodadewabo ongudadewabo owayengumthakathi owayenekhono lokushintsha ukubukeka kwakhe. I-stepisterister yaziwa ngokuthi igama elithi Morgana le Fay, Morgane, Morganna, Morgaine namanye amagama. Noma ngabe yiliphi igama, waziwa njengomlingo noma umthakathi onamandla omlingo.
Lo mphumela uyinkohliso engaqondakali exhumene nogu lwaseBarcelona, ​​eNorway, eNew Zealand futhi, ikakhulukazi, iStrait of Messina, indawo eseningizimu ye-Italy, phakathi kweCalabria neSicily. Izakhiwo zemilingo zibangelwa lo mphumela ngoba zingabonakaliswa ngezindlela ezahlukahlukene. Umphumela we-Fata Morgana utholakale ngezikebhe ezindizayo, amadolobha antantayo, amawa, izinguzunga zeqhwa, izintaba eziqanjiwe noma izakhiwo eziseduze nezwe lamaphupho kuneqiniso.
Kunabantu abaningi abakhomba ukuthi ubuphila ngemibono ebonakalayo njengaleyo eshiwo kuwo wonke amagquma. Amanethiwekhi omphakathi agcwele izithombe ezinhle kakhulu ngomphumela we-fata Morgana. Ngubani ongazi ukuthi lo mphumela umayelana nani, bakholelwa ukuthi bathole isimangaliso. Ezindabeni eziningi uMorgana ungumfundi wemilingo uMerlin. Ungumlingiswa oqanjiwe yize kweminye imisebenzi ebonakala eyimbangi yakhe. Ukuze amthakathe, uMorgana uphethe ukumyenga ukuze aguqule ukubukeka kwakhe njengo-Arturo.
Njengoba nje uMorgana akwazi ukuguqula ukubukeka kwakhe nokukhohlisa u-Arturo noMerlin, izithombe ezibonwe zisuka ogwini zikhohlisa ngokufanayo yingakho-ke ehlotshaniswa naleli gama.
Kungani umphumela we-fata Morgana uvela
Ake sibone ukuthi yiziphi izizathu zangempela ezenza lo mphumela uvele. Lapho imisebe yokukhanya evela elangeni ekuqaleni ifika iqonde, idlula emkhathini nakuzo zonke izindimbane zomoya ezizungezile. Lapho behlangabezana noquqaba lomoya olujiyile, baqala ukuphambukisa umzila wabo futhi babe ogobile. Isimo sokuphambuka kwemisebe yokukhanya saziwa ngegama le-refraction. Kungukuphinda kwakhe okudala imiphumela ethile yokubuka.
Impela wake wahamba ngemoto ngosuku olushisayo futhi wabona kude emgwaqeni sengathi kunamanzi. Njengoba usondela, uyaqaphela ukuthi kungumphumela wokubuka kuphela. Enye yezinto ezithinta ngqo ukuqondiswa yimisebe yelanga yizinga lokushisa kongqimba lomoya. Ungqimba lomoya oludlula emisebeni yelanga luyaqina ngokubanda kwalo. Isimanga senzeka lapho imisebe yelanga kuqala idlula ungqimba lomoya ominyene onezinga lokushisa eliphansi elivamise ukuba sezingeni eliphakeme kakhulu lomkhathi futhi amanzi afinyelela ungqimba lwethempelesha eliphakeme okuyingxenye engezansi nokuthi aminyene kancane. Uma lokhu kwenzeka, izigaxa zenzeka futhi lapho zenzeka ogwini, zibizwa ngomthelela we-fata Morgana.
Zonke izigaxa ziyizinto ezihlobene nokusakazwa kokukhanya emithonjeni yezindaba okungafani. Inkomba ekhombayo iyahluka ngokuphakama nangobungako bokukhanya esikuthola elangeni. Ukuhamba kwamajika kuncike ebunzimeni bamanzi namandla emisebe yelanga. Amajika ashiwo anokufiphala maqondana nokwanda kwenkomba yokubuyisa. Lokho wukuthi, ukukhanya kuhlale kugobela ngasemkhatsini onenkomba ephakeme yokubuyisa. Le ndlela ingaba ngamanzi noma umoya.
Kunemibandela ethile yokuthi umphumela we-fata Morgana ukhiqizwe. Okokuqala, kufanele kube nokuguquka okushisayo phakathi kwezendlalelo eziseduzane nomhlaba noma amanzi. Ukuguqulwa okushisayo kungenye lapho kukhona ungqimba lomoya opholile ngaphezulu kunaphezulu. Kuphambene ngokuphelele nezimo ezivamile zemvelo. Kusho imibandela yilezo lapho ukwehla kwezinga lokushisa ukuphakama. Okusho ukuthi, njengoba sikhuphuka phezulu sinciphisa izinga lokushisa. Ekuguqukeni okushisayo, okuphambene nalokho, njengoba sikhuphuka phezulu, izinga lokushisa liyanda.
Lapho ukukhanya ekugcineni kufinyelela ngaphezulu, isikhundla sangempela sento singaphansi kokuchazwa komuntu. Futhi ukuthi ukwakheka kwesithombe kulungiswe ukukhishwa kokukhanya. Lokhu kuphika yikhona okubhekene nokushintsha isithombe. Ngakho-ke, Akuyona yonke imicabango ebonakalayo yomphumela we-Fata Morgana ebukeka ifana. Kunabantu abahlukanisa amafomu athile ekukhohlisweni kanti abanye abantu bahlukanisa amanye.
Indawo lapho ungajabulela khona lo mphumela kaningi iseBarcelona. Eqinisweni, abantu abaningi bavuka entathakusa bayobheka izithombe ezinhle ezinikezwa yilo mphumela. Futhi ukuthi kunezikhathi eziningi zasekuseni lapho kunezimo ezifanele zemvelo zokushintshwa okushisayo kokukhiqizwa komphumela we-fata Morgana. Kukhulunywa ngokwengeziwe amadolobha antantayo abonakala ngale mibono. Yize kungukubonakaliswa kwesanga kuphela, kungamangaza umuntu ngaso sonke isikhathi ngomcabango wokuba khona kwamadolobha entanta nento ethile yomlingo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi uyini umphumela we-fata Morgana nokuthi wenzeka kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Umphumela we-Fata Morgana